कोरोना नियन्त्रणमा विगतका अनुभव र अबको वाटो
टेक बहादुर कार्की / डा.जीवनमणि पौडेल
मानव अस्तित्वमाथिको महामारीले विश्व समुदाय आक्रान्त र भयभित छ । २०१९ को अन्त्य तिरबाट देखिएको यो कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) संकटले करीव चार महिनाको अन्तरालमा दुई लाख मानिसहरुको मृत्यु भईसकेको छ । हुन त रोग, भोक,दुर्घटना, अपराध र अन्य कारणले दैनिक एकलाख पचास हजार मानिसले ज्यान गुमाउँछन तर यो संख्याले मानिसको मनोबिज्ञानमा भँुइचालो ल्याउँदैन । जब कुनै घटना प्रत्येक मिनट, घण्टा, दिन र रात समाचार बन्न थाल्छ, त्यसले मानव मष्तिस्कमा आतंक सिर्जना गर्छ नै । यो त्रासदीको साक्षी बनेका युरोप, अमेरिका र अन्य देशहरु मृत्युको प्रलयमा पुगेर केहि हदसम्म तंग्रिन लागेका छन् ।
हामीसँग प्रशस्त समय थियो, यो कोभिडसँग जुध्ने तयारी गर्न । तर कोभिडलाई खेलाँचीको रुपमा लियो सरकारले । स्वास्थ्य सामग्री लगायतका आवश्यक उपकरण खरीदमा सरकारका मन्त्रीहरुको संलग्नताका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न गरायो । सरकारले जनताको स्वास्थ्यको सम्वन्धमा कुनै चासो देखाएन । विश्व परिवेशमा महामारीको असर प्रत्यक्ष देख्दा समेत सरकार पिठ फर्काएर आफ्नै स्वार्थ र भ्रष्चारमा लिप्त रह्यो । आज भयले हामीलाई जसरी निल्दैछ, यो मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो चुनौती भएको छ ।
कोभिडवाट पिडित देशहरु इटाली, बेलायत, अमेरिकाले निकै ठुलो मानवीय क्षति व्यहोर्नु प¥यो । त्यही संकट र चुनौतीबाट सिकेर उनीहरुले विश्वलाई सन्देश दिएका छन । करीव दुई महिना यी देशहरुमा मानिस लासमाथि नै हिंडे । लासहरु राख्ने र गाड्ने ठाउँसम्म थिएन इटालीमा तर पनि साहसका साथ जसरी अगाडी बढ, त्यो निकै प्रशंंसनीय र अनुकरणीय छ । महामारीको उचाइसँग मानिसले डट्नै पर्ने हुन्छ ।
फितलो सरकारी रणनीति
करीव चार महिनाको महामारी इतिहास देखेको नेपालले एकातर्फ समय खेर फालेको हो भने अर्कोतर्फ रणनीति नै फितलो बनाएको कुरा देखिन्छ । भारतमा काम तथा व्यवसायिक सिलसिलामा रहेका नेपालीहरुलाई लकडाउन भईसकेपछि नेपाल प्रवेश निषेध गर्नु नै कोरोनालाई बाजा बजाएर नेपाल भित्र्याएको हो । सिमामा जनता रोकेर स्वदेश भित्रिन बञ्चित गर्नुले सरकारको नागरिक प्रतिको गैरजिम्मेवारी मात्र होइन, अमानवीयताको पराकाष्टा नै नाघ्यो । नेपाल र भारत सरकारबिचमा भएको भद्र सहमति अनुसार भारतमा रहेका नेपालका नागरिकलाई भारत सरकारले आवश्यक व्यवस्था सहित भारतमै क्वारेन्टाइनमा राख्ने र नेपालले पनि सोही बमोजिम गर्ने सहमतीको समाचार आएको थियो तर किन भारतले हाम्रा नागरिकलाई सिमासम्म ल्याएर अमानविय ब्यवहारको पराकाष्टा चुम्दै भद्र सहमतिको धज्जी उडाएको ? नेपालले उसका यहाँ भएका नागरिकलाई त्यही व्यवहार गरेर बदला लिएजस्तो त लागेन ! कि सानो देशको भन्दैमा जे मन लाग्यो ,त्यहि गर्ने ? नेपाल सरकारपनि यस्ता कुरामा चुक्नु भएन । निरीह जनता खोलामा दिनभर रातभर जोखिम मौल्दै पौडिएर देश प्रवेशगर्दा राज्यले नाङ्गै समातेर प्रशासन पु¥याएका र १०–१५ दिन हिँडेर सोलुखुम्ब ुदेखि बालबच्चा, पोकापन्तुरा सहित भोकभोकै हिंडेर गाउँ फर्केकाहरुपनि कुनै प्रकारले महामारीका राजदुत बनेका थिए । त्यसबाहेक सिमामा प्रहरी प्रशासन प्रलोभनमा पर्दापनि कयौं मानिसहरु प्रवेश गरे र सम्पर्क बिहिन बस्दा समुदायमा बिस्तार गरे । अर्को कुरा सरकारका निकायहरुको लाचारीपनले सिमावर्ति क्षेत्रमा भित्रिएका मानिसहरु पहिचान गर्न नसक्दापनि महामारी गाउँ समुदायमा हुर्किंदै गयो ।
दोस्रो कुरा सरकारले सचेतता र इमान्दारीपुर्वक नागरीकहरुलाई खाली रहेका बिद्यालय तथा कलेजहरुमा खानपान र उचित स्वास्थ्य सुविधासहित क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए महामारी नियन्त्रण सहज हुन्थ्यो । सुनिन्छ, क्वारेन्टाइनबाट शंकास्पद संक्रमितहरु भागिरहेका छन । किन त ? यसरी भाग्नुमा पहिलो सरकारले नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा मानिस हुनुको अनुभुति गर्न दिएन । त्यहाँ खाना तथा अन्य साधारण सुविधाहरु समेत उपलब्ध नहुँदा भागिरहेका समाचारहरु सुनिन्छन । यस्तो दुरावस्थामा नागरिकलाई किन राख्ने ? यो महामारीको औषधी छैन् । क्वारेन्टाइनमा बस्दा उस्ले पौष्टिक खानेकुरा, तातोपानी र आवश्यक चिकित्सकिय सुविधा पाएमात्र उ रोगमुक्त हुन सक्छ, नत्र क्वारेन्टाइनमै मृत्यु हुन सक्छ । यी र यस्ता तमाम लापरवाहीले क्वारेन्टाइन नरकबासजस्तो भएको छ । यदि अव भारत लगायत तेस्रो विश्वबाट उद्धार गरेर ल्याइने नेपालीहरुले त्यही दुर्दसा भोग्नु प¥यो भने र उनीहरु पनि भागे भने देशको अवस्था के होला ? समय छँदै यस्ता कमी–कमजोरीहरु नसुधारे यस्ले भयावह अवस्था सिर्जना गर्छ ।
अर्को कुरा सरकारले लकडाउन सुरु गरेपनि उसकै निकायले समन्वयको अभाव, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीचमा महामारीप्रतिको गम्भीरतालाई ध्यानमा नराखी मनमौजी यातायात अनुमति बाँडेका कारणले संक्रमितहरु देशैभरी पुगे र महामारी बिस्तार गरे । दुई महिनाको बन्दाबन्दी निष्प्रभावी हुनुमा सरकारले लिएका फितला निर्णय र कार्यान्वयन नै हुन ।
सरकारलाई जनताले जसरी साथ दिए,सरकारले जनतालाई सेवा दिन सकेन । २ महिनाको बन्दाबन्दीमा रेन्डम स्याम्पलिङ तिब्र गरिदिएको भए त्यसले कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा ठुलो सहयोग पुग्थ्यो । त्यतिमात्र होइन,त्यसबाट आम नागरीकमा आत्मविश्वास बढ्नुका साथै क्षेत्रहरुलाई खतरा, कम खतरा र खतरामुक्तमा छट्याई मानिसहरुलाई बन्दाबन्दीको लामो प्रभावबाट पर्न गएको मनोबैज्ञानिक असरबाट मुक्ति दिन सकिन्थ्यो । बन्दाबन्दी महामारी रोक्ने उपाय त हो तर यससँग गाँसिएका अनेकन मनोरोग, चिन्ता र भयलाई कम गर्न यस्ता वर्गीकरणले निकै ठुलो भुमिका निर्वाह गर्दछ । त्यसबाहेक टेष्टको प्राप्त परिणामको आधारमा ति क्षेत्रहरुमा सुरक्षित ढंगले निर्माण, कारखाना तथा अन्य आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो, जुन यस बिषम परिस्थितिमा निकै महत्वपुर्ण र फलदायी हुन्थ्यो ।
दुई महिना निकै लामो अवधि हो । यस अवधिमा सरकारले प्रभावकारी काम गरेर डुब्दै गरेको अर्थतन्त्र र परनिर्भरतालाई घटाउन योगदान गर्ने अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्थ्यो । महिनौं महिना मानिसलाई घरबन्दी बनाएर राख्दा त्यसबाट पर्ने शारीरिक, मानसिक र आर्थिक असरले देशलाई ठुलो भार पर्न जाने निश्चित छ । बन्द लम्याउदै जाने सरकारको कदमले समाजमा पर्न गएको अघोषित नोक्सानी अपुरणिय छ । त्यो असर न्युनीकरण गर्न सरकारले निसर्त टेष्ट बढाउनुको बिकल्प छैन ।
कोभिड स्थानिय महामारी होइन तर यसले हाराहारी ३०० सय संक्रमित भइसकेका छन । माथि उल्लेखित उपायहरु अपनाएको भए हामी महामारीको चपेटाबाट बच्ने थियौं । सफल रणनीतिक सतर्कता र नियन्त्रणले ताइवान कोरोना फ्रि जोन छ । यदि सरकार जिम्मेवार बन्न सक्ने हो भने सबै कुरा सम्भव छ तर हाम्रोमा त्यो हुन सकेन ।
महामारी त फैलिसक्यो ! विश्व स्वास्थ्य संगठनका सल्लाह र सुझावहरु अपनाएर केही हदसम्म सुरक्षित हुन सकिन्छ । तर हाम्रो जस्तो सामाजिक संरचना र चेतनाको स्तर भएका समाजमा यतिले मात्र पार पाउन सकिन्न । महामारी अझ सशक्त र बृद्धि हुने कुरा निश्चित छ । हाम्रा बैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरुको आगमनले पुनः महामारीको अवस्था निकै चुनौतिपुर्ण हुने कुरामा दुइमत छैन । त्यसो भए हामीसँग के उपायहरु होलान त यो बिकराल परिस्थितिसँग जुध्न ? कसरी अगाडी बढ्ने त ? के यसको औषधी बनेपछि मात्र हामी सहजतामा फर्किन सक्छौं ? के हामी मौलिक उपायहरु अपनाएर यो महामारीबाट सुरक्षित रहन सक्छौं कि सक्दैनौं?
बिभिन्न औषधी बिज्ञान, अनुसन्धान, स्वास्थ्य बिज्ञ तथा अन्वेषकका अनुसार पनि यसको औषधी बन्न अझै ६÷८ महिना लाग्न सक्ने जानकारी तथा तथ्यहरु बाहिरिरहँदा हामी ढुक्क भएर काममा फर्कन लगभग त्यति अवधि प्रतिक्षा गर्नै पर्ला । तर यति भनिरहँदा विश्वका सबै मानिसहरु यो अवधीभरी काम बिना गुजारा गर्न सक्छन त ? यस्ता तमाम प्रश्नहरु हाम्रो सामु रहेका छन । त्यसैले हामीहरु अवका दिनमा आत्मबल बलियो बनाउँदै आवश्यक सतर्कता अपनाएर काममा नफर्के त हुन्न । सामाजिक दुरी कायम गर्दै अगाडी बढ्न नसके हामीहरु विकराल अभाव र गरीवीको चपेटामा परिसकेका हुनेछौं ।
दुइ दिन यताका दुइवटा मृत्युलाई कोरोनासँग हेरिएको छ । यदि यस्तो प्रकृति र अवधिलाई हेर्ने हो भने यो निकै अप्रत्यासित र खतरनाक हुनपनि सक्छ । यदि भाइरस भुगोल अनुसार आफ्नो प्रभाव बदल्छ र यसको आम चरित्रबाट फरक रुपमा असर देखाउछ भने यो निकै भयानक हो तर यसबारेमा बिज्ञहरुका अनुसार अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । यी दुइ घटनाको पछाडि महिलाको परिवारमा गरिएका परीक्षण हेर्दा नवजात शिशु लगायत सुत्केरीलाई स्याहार गर्ने परिवारका सदस्यहरुपनि कोरोना परिक्षणमा संक्रमित नदेखिनुले यहाँ धेरै प्रश्नहरु जन्मिन सक्छन । आयो भाइरस कमजोर भनौं या रहस्यमयी हो दुविधा छ । यस्ता तथ्यले कोभिडको सम्वन्धमा गरिएका अध्ययन, अनुसन्धान र विश्वसनियतामा गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । के विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएका जानकारीहरु गलत हुन या भाइरसको प्रकृति बुझ्न बिज्ञान चुकेको हो ?
अवका सम्भावित उपायहरु हामी आफैंसँग निर्भर रहने छन । सुरुवाति समयमा युरोप तथा अन्य देशमा अपनाइएका चिकित्सकिय उपायहरु त्यति लाभप्रद देखिएनन् । त्यसैले युरोप लगायत अमेरीकाले २ महिनाको अवधिमा निकै ठुलो मानविय क्षति ब्यहोर्नु प¥यो । तर महामारीसँग जुध्ने सिलसिलामा मानिसहरुले मौलिक उपायहरु निकाले, जसले औषधी र चिकित्सा पद्धतिभन्दा प्रभावकारी र सुरक्षित परिणामहरु निकाल्न सहयोग ग¥यो । हामी २ महिनादेखि बेलायत र अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायसँग बराबर सम्पर्कमा रहेर त्यहाँका अनुभवहरु संकलन गर्दै रहेको छौं । बेलायतमा मृत्यु भएका नेपालीहरु प्राय लामो समयदेखि त्यहीं बसोबास गरिरहेका, सर्तकताका सन्दर्भमा कमजोर रहेका, खानपान संस्कारमा ध्यान नदिएका र भाषामा राम्रो पहुँच नभएका कारणपनि चिकित्सकका सुझावहरुलाई चुस्त दुरुस्त अपनाउन नसक्दा ज्यान गुमाउनु परेको अनुभव र तथ्यहरु पाइएका छन । त्यसैगरी अमेरीकी सन्दर्भको कुरा गर्दा त्यहाँ प्रारम्भिक चरणमा संक्रमितहरु क्वारेन्टाइनमा राखिए । क्वारेन्टाइन अवधिमा रोगीहरु अपेक्षित रुपमा लाभान्वित हुन नसकेपछि घरमै आइसोलेसन अपनाइ बस्न सरकारले सुझाएपछि निकै उपलब्धिहरु भएका उदाहरणहरु सुन्नमा आए । किनकी घरमा बस्दा परिवारको रेखदेख र पौष्टिक आहारले महामारीबाट तंग्रीन निकै द्रुतगतिमा सहयोग ग¥यो ।
राष्ट्रिय तदारुकताको कमी
यो महाबिपत्तिबाट संसारको अर्थतन्त्रमा अपुरणीय क्षति पुगेको छ । युरोप अमेरीकाले मात्र होइन एशियाका बंगलादेश, पाकिस्तान र भारतले अरवौं खरवौंको राहत प्याकेज ल्याएका छन तर हाम्रो सरकारले राहतप्रति कुनै चासो र सरोकार देखाएको छैन । अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई प्रतिहप्ता प्रतिव्यक्ति ६०० डलर र थप अरु स्वास्थ्य बिमा समेत गरिदिएको छ । भारत र अन्य एशियाली मुलुकहरुले धराशायी अर्थतन्त्र उठाउन र जनताको मनोबल उच्च राख्न निकै महत्वाकांक्षी योजनाहरु अगाडी सारेका छन । हाम्रो सरकारको भर्खरै ल्याएको निति तथा कार्यक्रममा राहत र थलिएको अर्थतन्त्र उठाउने कुनै ठोस योजनाहरु नआउनुले जनता थप निरास बनेका छन । उद्योगी,व्यवसायी, लगानीकर्ता र सेवा व्यवसायमा संलग्नहरुको स्थिति झन भयावह छ । हस्पिटालिटिसँग सम्बद्ध होटल र पर्यटन त केहि बर्ष उठ्न सक्ने सम्भावना नै छैन । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिनु परेका उद्योगी, व्यवसायीको राहतको निम्ति सरकारले दिर्घकालीन योजना बनाउनु पर्दैन र ? सांगठनिक क्षेत्रका कामदारले त केही प्रतिशत राहत पाउलान तर असंगठित र अस्थायी पेसामा सम्वद्धहरुको अवस्था के हुन्छ ? के सरकार नागरिकप्रति यस्तै अनुदार बनेर पन्छाउ प्रवृत्ति पालेर नागरिकप्रतिको दायित्व पुरा गर्न सक्छ ? सरकारलाई के कुराले जनता र देशप्रति यति गैरजिम्मेवार बनायो ?
महाव्याधिपछिको अर्को भयावह अनिकालले धेरै मानिस मर्ने सम्भावना टाढा छैन । हरेक रात ८ करोड मानिस भोकै सुत्न बाध्य छन भने प्रत्येक १० मिनेटमा २ जना भोकमरीले मरिरहेको अवस्थामा आउँदो अनिकालको महाप्रलयलाई कम गर्न सरकारले कृषिमा मौसमी खेती तथा तरकारी, फलफुल र पशुपालनमा के योजना बनाएको छ ?
मौलिक ज्ञान, सरसफाइ, सनातन संस्कारको अभ्यास र ताजा खानेकुराको सेवन
हाम्रा दैनिक जीवनका सनातन गतिविधिहरु अझ परिस्कृत र आचारपुर्ण ढंगले पालना गर्नुपर्ने छ । हाम्रा भान्सामा प्रयोग हुने बेसार, लसुन, अदुवा, मरिच, टिम्मुर, मेथी, ज्वानो, चिमफिङ, गुर्जो, प्याज, बुढो ओखती, जिम्मु जस्ता मसला तथा औषधीजन्य वस्तुहरुको सेवन नियमित गर्नु जरुरी छ । अमेरीकामा संक्रमित नेपाली भाषीहरुसँग कुराकानी गर्दा २५ बर्षदेखी ८३–८५ बर्ष उमेरकाहरु यिनै खानेकुराहरु खाएर २२ दिनदेखी ३० दिनभित्रमा निको भएर काममा फर्केको जानकारी प्राप्त भयो । औषधी त केही छैन, यिनै खानेकुराहरु नियमित खाने र १०–१० मिनेटको अन्तरमा तातोपानी र बेला बेलामा काँचो बेसार खाने गर्दा यसबाट निको भएको कुरा बताए । त्यसबाहेक भान्सामा ताजा सागसब्जी, फलफुल र तातो–तातो खानाहरु खानाले शारीरिक तन्दुरुस्ती बढ्ने र यो महामारीलाई जित्न सकिने प्रमाणित र ब्यवहारिक तथ्यहरु जानकारीमा आएका छन ।
बेदमा बेसारलाई सयौं रोगको औषधी मानिन्छ । त्यसैले काँचो बेसार (नउसिनी सुकाएर बनाइएको धुलो) निकै ठुलो एण्टिबायोटिक हो । सागसब्जी बाहेक गेडागुडीको रस, कोदो–फापरको ढिंडो, ब्ल्याक राइस, जुनेलो, सिताके च्याउ जस्ता खानेकुराहरु मिलाएर खान सके रोग लागिहालेपनि त्यत्ति गाह्रो पार्न सक्दैन ।
त्यसबाहेक हामी घरमै बसी नियमित योग, साधना र व्यायाम गरी स्वास्थ्यलाई तन्दुरुस्त बनाउन सक्छौं भने गीतसंगीत सुनेर र अभ्यास गरेर मन मष्तिष्क स्वस्थ बनाउन सक्छौं । यसबाहेक रुचिका पुस्तकहरु पढेर र क्षमता र ज्ञान अनुसार सिर्जना गरेर आफ्नो समय फलदायी बनाउन सक्छौं ।
प्रेरणा, साहस र धैर्यता
हामी कोभिडसँग त्यति परिचित छैनौं । सामाजिक सञ्जालमा एक दुईजनाको मृत्युको खबरले निकै हत्तोत्साही र निराजनक बिचारहरु व्यक्त भएको पाइयो । बेलायतबाट प्रकाशित हुने द इन्डिपेन्डेन्टमा दिएको आजसम्मको संक्रमितको संख्या करीब १ करोड ९० लाख रहेको छ । त्यस्तै अमेरिका लगायत रुस र ब्राजिल पछिल्लो समय संक्रमण र नोक्सानी व्यहोर्नेको पहिलो स्थान नउक्लेलान भन्न सकिन्न । हाम्रो छिमेकी भारतपनि निकै प्रभावित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । हामीले ४०० संक्रमीतको संख्या सुन्दा अव सकियो मरियो भन्ने चिन्ताहरु बारम्बार सुन्ने र पढ्ने गरेका छौं । तर हामी जे सोच्तैछौ, त्यो कदापी होइन । करीव ६ महिनाको सेरोफेरोमा ३ लाख ७० मानिसहरु यसबाट मरेका छन । हामी हरेकदिन रोग, भोक र शोकले मरेका १ लाख ५० हजारको तथ्यांक बिर्सीरहेका हुन्छौं । यसरी हेर्दा ६ महिनामा ३ दिनको मृत्यु संख्या बराबर मात्र पुगेको छ कोभिडले मृत्यु हुने ! हामी किन निराश र हतास ?
यस्तो निरासा र संकटमा राष्ट्रले सार्वजनिक सञ्चार माध्यहहरुबाट राष्ट्र प्रमुखदेखि देशका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु, मनोबैज्ञानिक, समाजशास्त्री, महामारीविद्, कलाकार, नायक, गायक, मानवशास्त्री, पोषणवीदहरु मार्फत जनतालाई उत्साह, आँट, प्रेरणा, काउन्सेलिङ र राज्य आफु सबैको संरक्षक भएको र जनताका निम्ति गर्दै गरेका र भविष्यलाई ध्यानमा राखेर गरिने प्रयासहरु हरेकदिन जनता समक्ष राख्नु पर्दछ । मानिसको मनोबिज्ञानमा एकपटक छिरेको त्रास र भयलाई निकाल्न मास थेरापीको आवश्यकता अपरिहार्य छ । राज्यले हरेक दिन जनतालाई निश्चित समयमा विज्ञहरुलाई जनतासामु सकारात्मक र सिर्जनात्मक सन्देशहरु प्रवाह गर्ने प्रयास चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु नितान्त आवश्यक छ । जब राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारीहरु जनतालाई साहस, प्रेरणा र धैर्यता प्रदान गर्न आफ्ना योजना र प्रयासहरुका साथ जनतासामु देखिन्छन, त्यसले जनतालाई महामारीसँग लड्ने र धैर्य गर्ने अदम्य साहस प्रदान गर्दछ ।
अन्तमा हामी सवै नेपालीहरुले आत्मबिश्वास बढाउँदै आफ्ना मौलिक ज्ञान, संस्कार तथा यस रोगसँग टाढा रही सुरक्षित हुन अपनाउने पर्ने सम्पुर्ण उपायहरु अपनाई अघि बढौं । हामी हार्ने छैनौं । हामी यो भाइरस युद्धलाई जितेर स्वस्थ्य जीवन जीउने प्रण गरौं ।